Sida loola qeybsado muusikada loo duubay iTunes
Sidee loo soo rogaa muusikada loo duubay iTunes
Markaad duubista muusikada iyo dukaamada muyuusikada digital-ka ah ayaa aad loo jecel yahay, ka soo dejinta MP3-yada laga soo galo webka waxayna ku darsamayaan iTunes inay u muuqdaan kuwo raqiis ah. Laakiin hadda iyo wixii ka dambeeya, gaar ahaan haddii aad soo qaadato cajaladaha bandhigga riwaayadaha ama dhageysiga muxaadarooyinka, waxaad u baahan doontaa inaad soo dejiso faylal shakhsiyeed.
Iibinta faylasha muusikada ee iTunes si aad ugu dhejiso qalabkaaga iOS ama dhagayso muusikadaada kombuyuutarkaaga waa mid sahlan. Waxay qaadataa dhowr fure oo ay ku helaan iyo soo dhoofiyaan faylasha.
Sida loo kordhiyo muusikada iTunes
Ka hor intaanad bilaabin, hubi inaad ogtahay meesha ay ku qoran yihiin faylashaada la duubay. Waxay ku jiri karaan faylkaaga ama faylashaada Meeshaada.
Si aad u soo dhajiso koox ka mid ah faylka oo dhan markiiba, riix menu menu.
Riix Add to Library .
Daaqad ayaa ka soo baxaysa taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku socoto hannaankaaga adag ee kombiyuutarka. U soco meesha ay feylku ka yimaadeen tallaabo 1.
Kaliya guji faylasha ama faylasha aad rabto in aad ku darto ka dibna guji Furan (Badal ahaan, waxaad labalaabi kartaa waxyaabaha aad rabto inaad ku darto).
Muuqaal horumar ah ayaa u muuqda sida iTunes uu wax ka qabanayo faylka.
Hubi in muusikada lagu darey adigoo furaya ikhtiyaarka Muusikada laga soo xigtey meel u dhow dhinaca sare ee bidixda. Ka dibna dooro Songs and guji Taariikhda Added Added si aad u aragto heesaha ugu dambeeya ee lagu daray.
Markaad ku darto heesaha, iTunes waa in ay si otomaatig ah u soocisaa magaca, farshaxanka, album, iwm. Haddii heesaha la soo dhoofiyo iyada oo aan lahayn fannaanka iyo macluumaadka kale , waxaad gacantaada u beddeli kartaa tagska ID3 naftaada.
Sidee Kumbuyuutarku ugu dhoofi karaa iTunes
Inta badan, marka aad muusikada ku darayso iTunes, waxa aad ku aragtid barnaamijka ayaa kaliya tixraacaya meesha dhabta ah ee faylasha. Tusaale ahaan, haddii aad nuqul ka sameysid shaashaddaada iTunes, ma feylayso faylka. Bedelkii, waxaad ku dari kartaa gaaban faylka miiska.
Haddii aad u guurto faylka asalka ah, iTunes ma heli karto mana awoodi doonto inaad u ciyaarto illaa aad gacantaada dib u hesho. Mid ka mid ah habka looga hortago tan waa in lagu hirgeliyo faylasha faylasha iTunes si gaar ah. Ka dib, xitaa haddii asalka dhabta ah la dhaqaajiyo ama la tirtiro, iTunes wali waxay haysaa nuqul ka mid ah.
Si sidan loo sameeyo, raac talaabooyinkan:
In iTunes, guji Edit (on PC) ama iTunes (on Mac ah)
On tabka Advanced, hubi faylasha nuqulka faylasha iTunes Media Media markaad ku dareyso maktabadda.
Marka ay suurtogal noqoto, heeso cusub oo la soo dhoofiyey ayaa lagu daraa \_ iTunes Media \_ folder oo ku dhexjira xisaabta user. Faylasha waxaa loo abaabulaa iyadoo lagu saleynayo magaca farshaxanka iyo magaca album.
Tusaale ahaan, haddii aad jiidato hees la yiraahdo "favoritesong.mp3" oo ay kuugu soo galaan iTunes iyadoo la adeegsanaayo, waxay geli doontaa faylkan sida: C: \_ Users \_ [username] \_ Music \_ iTunes \_ iTunes Media \_ [artist] \_ [album] \_ favoritesong.mp3 .
Isku bedelida qaababka kale ee loogu talagalay MP3
Dhammaan heesooyinka aad ka soo degtay internetka waxay ku jiri doonaan qaabka MP3 (waxaad u badan tahay inaad hesho AAC ama FLAC , maalmahaas). Haddii aad rabto in aad hayso faylashaada qaab kale, qaabka ugu fudud ee loo badalayo waa in la isticmaalo qalabka wax lagu dhiso ee lagu dhisay iTunes laftiisa . Waxaa sidoo kale jira bogag internetka ama barnaamijyada loo yaqaan 'audio convert convert audio' .
Siyaabo kale oo lagu kordhiyo muusikada iTunes
Dabcan, soo dajinta MP3s ma ahan habka kaliya ee laguugu daro muusikada maktabaddaada. Fursadaha kale waxaa ka mid ah:
Laga bilaabo CD- Si aad u ogaatid sida loo kiciyo heesaha, iska hubi Isticmaal iTunes si aad uqaybiso CD-yada iPhone ama iPod .
Apple Music - Si loogu daro heeso ama albaabo laga soo iibsado Apple Music (haddii aad tahay shirkad, waa), hubi sida loo isticmaalo Apple Music on iPhone .
Sidee GPS u shaqeeyaa iPhone
Helitaanka Inta badan Siri ee Navigalinta
Ilaali ID Your Password Apple ID? Sidee Loo-Qaldeeyaa Qaar ka mid ah Tallaabooyin fudud oo fudud
Sida Loogu Heli Karo iyo Ka Noqoshada Hab Dhicinta iPhone
Kusoo Bilow Abuur Abuurista Aqoonsiga Apple
8-da EDC ee ugu Fiican (Waxyaabaha Maalinlaha ah ee Maalinlaha ah) Muujiyeyaasha Fahamka ee Iibsiga 2018
Macmapka Maabsiyada Maabsashada
Wadooyinka iyo saameynta sawirada 3D
Gaajada? Isku day inaad isticmaasho Twitter-ka Emoji siinta Pizza-ga
20-ka munaasabadaha casriga ah ee 2018
Nyrius Aries Guri + Naqshad NAVS502 Wireless HDMI Kit Tijaabiyay
Soo-dhejinta Macluumaadka iyo Daaqadaha Kale ee Browsing to Google Chrome
Guudmarka Adeegyada Isku-dhafan ee Dijital ah (ISDN)
Sideen u helaa Nambarada Seri ah barnaamijyada barnaamijka Adobe CS?
Sims Bustin 'Out Cheats iyo Code for PS2
Sida Loo Xiriirayo Diiwaan-gelinta Meel-fog
Yamaha RX-V379 Aqoonsiga Tiyaatarka
Sida loo Fududeeyo Fariimaha la midka ah ee Gmail
7 Talo-bixin lagu hagaajinayo Ammaanka iPhone
Diiwaanada CD Best iyo Nidaamka Kaydinta CD
Baro inaad isticmaasho Google si aad u raadiso hal Website ah
Sidee loo Dhigaa Zoho Boostada oo ah xisaabta Push ee Android
Tani waxay ku xiran tahay faylasha ku yaala Muuqaalka Maajo